‘लुम्बिनी आउन धेरै चिनियाँ आतुर छन्, तर पूर्वाधार भएन’ – Nepali online news portal
३२ श्रावण २०७७, आईतवार १७:२३ August 16, 2020 पाथिभरा संवाददाता
काठमाडौँ– “लुम्बिनी एक दुई दिन या एक हप्तामात्र घुम्ने ठाउँ होइन । लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले दुई चार दिनमात्र घुमेको सुनाउँछन्, मलाई अचम्म लाग्छ । लुम्बिनीको अध्ययन हप्तौँ गर्दा त पुग्दैन एक हप्ताले के हुन्छ ? लुम्बिनी विश्वकै यति महत्वपूर्ण, पवित्र र अलौकिक स्थल हो यसको भ्रमणका लागि जोसुकैका लागि पनि कम्तीमा दुई हप्ता चाहिन्छ ।”
चिनियाँ बुद्धिस्ट एसोसियसनको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सदस्य सि चोङ योङले लुम्बिीको महत्वबारे यसरी बयान गरिरहँदा उनको मुहारमा खुशी थिएन । एकैछिनमा उनले भनिन् “तर के गर्नु, यहाँ पूर्वाधार नै छैनन् । भ्रमणका लागि ठूलो सङ्ख्याका चिनियाँ यहाँ आउन निकै इच्छुक छन्, यहाँ आएर बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्धको जन्मस्थल र यससँग जोडिएका धेरै कुराहरुको अध्ययन गर्न पनि चाहन्छन् तर उनीहरुलाई बस्ने राम्रा र ठूला होटलहरु नै यहाँ छैनन्, हाल उपलब्ध संरचनाहरु पर्याप्त छैनन् ।”
उनले भनिन् “चीनमा त एउटै होटलमा सयौँ कोठा हुन्छन्, ठूलो सङ्ख्याका पर्यटक अटाउँछन् । तर यहाँका होटलहरु पनि साना साना छन् । लुम्बिनीमा थोरै होटल छन् र भएका पनि सानो आकार र क्षमताका छन् । चिनियाँहरु आउँदा एकै समूहमा सयौँको सङ्ख्यामा आउन र भ्रमण गर्न रुचाउँछन् र उनीहरु एकै ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् । तर पनि उनीहरुलाई पुग्ने ठाउँ नै छैन यहाँ । त्यसैले ठूलो समूहमा आउने र घुम्ने स्वभावका पर्यटकका लागि यहाँ होटल र अरु पूर्वाधारहरु पनि आवश्यक छ, त्यसको मैले कमी नै देख्छु ।”
लुम्बिनी आउने चिनियाँ पर्यटकले आफ्नो संस्कृति र कला पनि त्यहाँ खोजेको हुन्छ । त्यसैगरी चिनियाँ पर्यटकहरुमध्ये कमैले मात्र अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्न सक्छन् । यहाँ आएका पर्यटकलाई चिनियाँ भाषामा नै सहजीकरण गरिदिने र यहाँको बसाई अवधिका अन्य आवश्यक सहयोगहरु पुर्याउने विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिन सकेमा अझै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । त्यसैले चिनियाँ बौद्ध गुम्बाको तर्फबाट पनि नेपाल र चीनसम्बन्धी सांस्कृतिक आदानप्रदानको कामका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको उनले बताए । यस्ता कुराहरुले यहाँ आउने विदेशी पर्यटकहरुको बसाई अवधि लम्ब्याउन, फेरि अर्काे पटक पनि यहाँ आउन प्रेरित गर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध सदियौँ पुरानो र भावनात्मक रहेको उनी बताउनुहुन्छ । यी दुई देशबीच धेरै पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका अनगिन्ती तथ्यहरु रहेका छन् उनी भन्छन् । चीनका बौद्धमार्गी नागरिक सबैलाई जीवनमा कम्तीमा एक पटक लुम्बिनी ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो उत्कट चाहना रहेको उनले सुनाउनुभयो । गएको करिब १० वर्षदेखि प्राय नेपालमै र बढी लुम्बिनीमा बस्दै आएका उनले दुई देशबीचको खासगरी सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरेको बताए । नेपालमा विसं २०७२ मा गएको भूकम्प तथा हाल जारी कोरोना महामारीमा उनको पहल र समन्वयमा चिनियाँ बुद्धिष्ट एसोसिएनका तर्फबाट ठूलो सहयोग प्राप्त हुदै आएको छ ।
निर्देशक योङले गएको डिसेम्बरको अन्तिमतिर पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना महामारीमा नेपालले चीन सरकारलाई मास्क सहयोग गरेपछि चीन सरकार र चिनियाँ नागरिक निकै खुशी भएको आफूले पाएको स्मरण गर्नुभयो । उनले भनिन् “हुनत त्यो सहयोग ठूलो थिएन तर त्यो सहयोगभित्र छिमेकीको माया लुकेको थियो ।” त्यसैले गर्दा पनि चीनले नेपाललाई यो महामारीबाट उम्किन सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले भनिन्– “अप्ठेरो परेका बेला चीनले नेपाललाई र नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको राम्रो विगत हामीसँग छ, हाल नेपालमा देखिएको महामारीको नियन्त्रणमा पनि चीनले सक्दो सहयोग गर्नेछ ।”
त्यसैले चिनियाँ बुद्धिष्ट एसोसियसनअन्तर्गतका चङहाउ र सेनचेन हङ्फा मन्दिरको च्यारिटी फाउन्डेसन तथा चिनियाँ बौद्ध गुम्बाहरुको संस्थाका तर्फबाट उनीकै पहलमा नेपाललाई ठूलो मात्रामा सर्जिकललगायतका मास्क र अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको छ । गतहप्ता उनी काठमाडौँ आएर नेपाल सरकारले जारी राखेको कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा सघाउने उद्देश्यले ती संस्थाहरुका तर्फबाट १३ लाख ३७ हजार थान मास्कलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । उनले यो सहयोग नेपाल ट्रान्स हिमालयन सोसाइटीलाई उपलब्ध गराएको र उक्त सोसाइटीले व्यक्ति तथा सुमदायको आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिने बताएको थियो ।
राइड थ्रु सिन्धुलीगढी साइकल यात्राः पर्यटनमन्त्रीले गरे साइकल चढेर सुभारम्भ
आहा ! कति राम्रो तिम्बुपोखरी
यस कारण जाँदाजाँदै भवन भट्ट फेल